Dawladda oo ku talo jirta in a adkeeyo xuquuqda shaqaalaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Morgan Johansson, wasiirka cadaaladda iyo soo-galootiga. sawir: Sawirle: Izabelle Nordfjell/TT
Dawladda oo ku talo jirta in a adkeeyo xuquuqda shaqaalaha
Johansson: Taageero ballaaran ayuu haystaa qorshahan.
La daabacay torsdag 1 september 2016 kl 11.08
Dawladda ayaa ku talo jirta qorshe la xiriira in xuquuqdooda la adkeeyo howl-wadeennada ka howl-gala shirkadaha mulkida loo leeyahey ee ku howl-gala howlaha dar-yeelka caafimaadka iyo waayeelka, xannaanada iyo iskuullada ay dawladdu maal-geliso iyo iney xaq u leeyihiin sidii ey saxaafadda ugu war-gelin lahaayeen caqabadaha ka taagan goobaha ey ka howl-galaan.
Iyadoona ay dawladdu ku talo jirto qorshahaa inay maanta soo ban-dhigto.
Qorshahan ayaa ka mid ah heshiisyada ey wada gaareen dawladda iyo xisbiga Bidixda (Vänsterpartiet), sida uu sheegay hoggaamiyaha xisbiga Jonas Sjöstedt (V).
– Waa tallaabo muhiimmad ballaaran ugu fadhida xisbiga Bidixda. Waxay ka mid tahay tallaabooyinkii lagu heshiiyey sidii looga gudbi lahaa macaashka faraha badan ee lagala baxo miisaaniyadda goobaha daryeelka caafimaadka, xannaanada iyo iskuullada ee shirkadaha mulkida loo leeyahey, waxa loo yaqaanno - vinster i välfärden oo si tartiib tartiib ah lagu talo jiro sidii loo joojin lahaa. Dhanka kale aniga qudhayda ayaa la kulmay marar badan shaqaale ka howl-gala goobaha dar-yeelka waayeelka oo ka cabsi qaba iney caqabadaha ka aloosan hoowlahooda ku war-geliyaan. Iyadoona iminka shaqaalahaa la siin doono xuquuq u dhiganta midda ey leeyihiin howl-wadeennada ka howl-gala goobaha maamullada degmooyinku gacanta ku hayaan iyo iney iska diidaan haddii ey jiraan dhibaatooyin, looguna tallaab-san lahaa sidii loo sixi lahaa, sida uu sheegay Jonas Sjöstedt (V).
Qorshahan ayaa la xiriira in shaqaalaha ka howl-gala shirkadaha mulkida loo leeyahey ee daryeelka, xannaanada iyo iskuulka ee lagu miisaaniyad geliyo cashuurta bulshada laga qaado ey xaq u leyihiin iney la hadli karaan saxaafadda haddii ey caqabado ku arkaan goobaha ey ka howl-galaan.
Su’aashan ayaa ah mid horay baaritaan ay ugu sameeysay dawladdii midaan iminka jirta ka horeeysay, hase yeeshee soo daahday, iyadoona uu dhanka kale uu dhaleeceeyay qorshahan guddi hoosaadka baarlamanka ee dastuurku.
Wasiirka shuruucda Morgan Johansson (S) ayaa dhaleeceeyntan ku macneeyay iyada oo dawladdii ka horeeysay middan uu xubinta ka yahay ka caga jiiday.
– Waa in la ogaado garabyada qaarkood iney ka soo hor-jeedaan tallaabadan. Waxaa kaloo ka soo hor-jeedey shirkadaha Vårdföretagarna, Almega iyo ururka ey ku midoobeen shirkadaha mulkida loo leeyahay, iyagoona u haysta in ay bannaanka u soo bixi kari doonto sirta shirkadaha. Hase yeeshee ay dawladdayadu aamin-san tahay in lagama maarmaan ay tahay in lagu tallaabsado. Iminka heshiis ayaa middaa ka jira, una maleeyn maayo in dhibaato ay ka hor iman doonto kolka baarlamanka la soo hor-dhigo, sida uu sheegay Johansson (S).
Qorshan xeerka ayuu macnihiisu yahay in aaney maamullada shirkaduhu baaritaan la daba gli karin sidii ey ku ogaan lahaayeen cidda la hadashey saxaafadda ee ku war-gelisay howl-darrida ka taagan goobta shaqada ama shirkadda.